किन विमान कर्मचारीहरु प्रायः महिलाहरु हुन्छन् ? यसको पछाडि यस्तो छ रोचक कारण । – List Khabar
Home / समाचार / किन विमान कर्मचारीहरु प्रायः महिलाहरु हुन्छन् ? यसको पछाडि यस्तो छ रोचक कारण ।
किन विमान कर्मचारीहरु प्रायः महिलाहरु हुन्छन् ? यसको पछाडि यस्तो छ रोचक कारण ।
admin3weeks ago समाचार Leaveacomment 93 Views
के तपाईंले कहिलै हवाई यात्रा गर्नुभएको छ ? यदि छैन भने, तपाईंले कसैलाई फिल्म वा ब्लगमा यात्रा गरिरहेको देखेको पक्कै हुनु पर्छ । यस समयमा तपाईले एउटा कुरा याद गर्नुभयो होला कि अधिकांश महिला कर्मचारीहरू यात्रुहरूलाई मद्दत गर्न आएका…
के तपाईंले कहिलै हवाई यात्रा गर्नुभएको छ ? यदि छैन भने, तपाईंले कसैलाई फिल्म वा ब्लगमा यात्रा गरिरहेको देखेको पक्कै हुनु पर्छ । यस समयमा तपाईले एउटा कुरा याद गर्नुभयो होला कि अधिकांश महिला कर्मचारीहरू यात्रुहरूलाई मद्दत गर्न आएका हुन्छन्। एयर होस्टेस यात्रुहरूको हरेक विवरणको हेरचाह गर्न छनौट गरिएको हुन्छ ।
विश्वभरका धेरै उडान कम्पनीहरूले उडान परिचारकको रूपमा पुरुष भन्दा महिला बढी छान्छन्। यो मात्र होइन, विमान भित्र काम गर्ने चालक दलका सदस्यहरू पनि महिला हुन्छन । केही अनुमानका अनुसार पुरुष र महिला केबिन चालक दलका सदस्यहरूको अनुपात २/२० हो। जबकि धेरै विदेशी एयरलाइन्समा समान अनुपात ४/१० हुन्छ।
यी तथ्यांकले उडान स्टाफमा महिलाहरूको बढी सहभागिता रहेको स्पष्ट देखाउछ । प्रश्न उठ्छ कि यो किन हुन्छ? किन पुरुषहरूलाई भन्दा महिलाहरूलाई उडान स्टाफमा बढी प्राथमिकता दिइन्छ? तपाईं धेरैले सोच्दै हुनुपर्दछ कि यसको कारण सुन्दरता हो। तर यो त्यस्तो होइन, यसको पछाडि कारण केहि अर्को हो। आउनुहोस जानौ त्यसको बारेमा
यो एक धेरै ठूलो मनोवैज्ञानिक तथ्य हो कि धेरै मानिसहरू पुरुषहरूको तुलनामा महिलाको कुरा ध्यान दिएर सुन्छन् र सुन्न मात्र हैन उनीहरूको शब्दहरूको पालना पनि गर्छन्। सुरक्षा मार्गनिर्देशनहरू र उडानमा आवश्यक दिशानिर्देशहरू पालना गर्न आवश्यक छ, त्यसैले उडानमा धेरै जसो एयरहोस्टेसहरूले यी सबै चीजहरूको घोषणा गर्दछन ।
महिलाहरूलाई अधिक नै उडान स्टाफमा छनौट गर्नुको एक प्रमुख कारण यो हो कि तिनीहरूको चरित्र पुरुषहरू भन्दा अधिक कोमल, उदार र बिनम्र हुन्छ । उसको उदार चरित्रको कारण, उडान कम्पनीतर्फ यात्रीहरूको दिमागमा सकारात्मक छवि बन्न जान्छ ।
विमानमा वजन जति कम हुन्छ, त्यति नै इन्धन र पैसाको बचत हुने गर्द्छ । यस एपिसोडमा, महिलाको तौल पुरुषको भन्दा कम हुने र कम तौल एयरलाइन कम्पनीको लागि एक फाइदाका कुरा पनि हो। अक्सर पातलो र कम तौल भएका एयर होस्टेजहरु धेरै जसो उडानमा देखिन्छन्। यो यसको लागि सब भन्दा ठूलो कारण हो।
अर्को एउटा विश्वास यो पनि छ कि महिलाहरू पुरुषहरू भन्दा प्रबन्धन गर्न सक्षम हुन्छन् । उनीहरु कुनै पनि कुरा ध्यान दिएर सुन्छन र लागू पनि गर्छन । यी कारणहरूले गर्दा, पुरुषहरू भन्दा बढी महिलाहरू उडान टोलीमा समावेश हुन्छन् । तपाईंको जानकारीको लागि, हामी तपाईंलाई बताउन चाहन्छौं कि धेरै जसो एयरलाइन्सले पुरुषहरूलाई उहि परिस्थितिमा उडान परिचारकको रूपमा छनौट गर्दछ, जब त्यहाँ अधिक बल र कडा परिश्रम हुन्छ।
Previous भोली भदौ १५ गतेबाट स्कूल खुल्दै..
Next कक्षा १२ को परीक्षा भदौ अन्तिम सातादेखि सञ्चालन हुने